Good राम्रो योग व्यायाम र हिप पेन को लागी योग (स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग)
Yoga योग व्यायाम हिपको दुखाइको लागि
28 / 06 / 2016 /0 टिप्पणीहरू/i हिप, गुणस्तर लेख, व्यायाम र व्यायाम, व्यायाम stretching/av भोंड्ट
के तपाईलाई कम्मरले कष्ट दिदैछ? यहाँ Y योग अभ्यासहरू छन् जुन तपाईंलाई हिप गतिशीलता बृद्धि गर्न र हिप दर्द घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। हिप समस्याको साथ कसैसँग साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
योग र योग अभ्यास उपयोगी हुन सक्छ जब यो कसको मांसपेशी र मांसपेशिहरुमा आराम को लागी आउँछ। हामी मध्ये अधिकांश दैनिक जीवनमा धेरै नै बस्दछौं र यसले पछाडि, हिप, फिलाको पछाडि र सीटको मांसपेशीहरू पनि कडा पार्दछ। नियमित तन्काउँदा कडा मांसपेशीहरू र कडा जोड्नेहरूको प्रतिकार गर्न राम्रो उपाय हुन सक्छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि यी अभ्यासहरू एकसाथ गर यी बल व्यायाम हिप को लागी अधिकतम शक्ति को लागी।
१. अन्जनानेसाना (कम परिणाम)
यो योग स्थिति हिप स्थिति खोल्छ, मांसपेशिहरु को तन्काउँछ र तल्लो पछाडी राम्रो तरीकाले सक्रिय गर्दछ। एक विस्तार विस्तार मा शुरू गरेर र त्यसपछि व्यायाम चटाई बिरूद्ध तपाइँको पछाडि खुट्टा बिस्तारै कम। याद गर्नुहोस् कि घुँडा औंलाहरूका सल्लाहहरूमा जानु हुँदैन। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तल्लो पछाडि तटस्थ हुनुहुन्छ र4देखि १० गहिरा सास लिनुहोस्। -10--4 सेट दोहोर्याउनुहोस् वा तपाईंलाई आवश्यक भए जति चोटि सम्झनुहोस्।
१०. आनंद बलसाना (भित्री जांघहरूका लागि योग स्थिति)
एक योग स्थिति जुन फिलाको भित्र फैलन्छ - मांसपेशीहरू जुन हामी सबैलाई थाहा छ राम्रो तरिकाले फैलाउन गाह्रो हुन सक्छ। यसले हिप र सिटलाई फैलाउँदछ र अधिक लचिलोपन प्रदान गर्दछ। एक व्यायाम चटाईमा राख्नुहोस् र आफ्नो छाती तर्फ आफ्नो घुँडा तान्नुहोस् - तब आफ्नो खुट्टा को बाहिरी बिरुद्द मा आफ्नो हात राख्नुहोस् र हल्का तान्नुहोस् जब सम्म तपाईं यसलाई फैलिएको महसुस गर्दैन। Seconds० सेकेन्डको लागि समात्नुहोस् र sets- 30-3 सेटहरू दोहोर्याउनुहोस्। प्रगति भेरिएन्ट भनेको तपाईंको खुट्टाको भित्री भाग बिरूद्ध तपाईंको हात समात्नु हो।
V. वृक्ससाना (ट्रेपोसिटर)
व्यायाम, जो Sankrit मा Vrksasana भनिन्छ, नर्वेजियन मा "रूख मुद्रा" को रूप मा अनुवाद गर्न सकिन्छ, र जब तपाइँ स्थिति मा हेर्नुहुन्छ तपाइँ किन बुझ्नुहुन्छ। यो दुबै सन्तुलन र खुट्टा, कूल्हों र पछाडि शक्ति दिन्छ - एक राम्रो, दुबै बुढा र युवा को लागी चोट रोकथाम अभ्यास। पहिले दुई खुट्टा मा खडा र त्यसपछि बिस्तारै एक खुट्टा को विपरीत खुट्टा को भित्री मा माथि तान्नुहोस् - सन्तुलन र सही स्थिति पाउन र आफ्नो हात एक रूख को हाँगाहरु जस्तै गोली हान्न। 1-3 मिनेट को लागी स्थिति होल्ड गर्नुहोस्। दुबै पक्ष मा 3-4 सेट मा दोहोर्याउनुहोस्।
F. फ्रुग स्थिति
केही अधिक मांग, तर प्रभावशाली, व्यायाम जुन ज्ञात घुँडा निदानको लागि सिफारिश गरिदैन। तपाईंको घुँडामा उभिनुहोस् र तपाईंको शरीर फैलिएको हतियारको साथ अघि झर्नुहोस्। बिस्तारै घुँडाको बीचमा दूरी बढाउनुहोस् जब सम्म तपाईं फिलाको मांसपेशिको राम्रो तन्का प्राप्त गर्नुहुन्न, विशेष गरी भित्री भागमा। एखाहरू घुँडासँग मिल्दो हुनुपर्दछ र धेरै बढ्नु हुँदैन, किनकि यसले घुँडामा अनावश्यक दबाब दिन सक्छ। Seconds० सेकेन्डको अवधिमा sets- sets सेटमा प्रदर्शन गरियो।
कबूतर स्थिति हुन सक्छ माग शुरुआतीहरूको लागि, किनकि यो तपाईंसँग पहिले नै हिप र घुँडामा केही लचिलोपन हुनु आवश्यक छ। यसको प्रभावकारी हुनुको कारण यो हो कि यसले हिप र हिप संयुक्तका वरपरका मांसपेशीहरू तन्काउँछ। To देखि १० गहिरा श्वासको लागि स्थिति होल्ड गर्नुहोस्, करीव -०-5 Hold सेकेन्ड, त्यसपछि अर्को तर्फ स्विच गर्नुहोस् र आवश्यक अनुसार दोहोर्याउनुहोस्।
अर्को पृष्ठ: - हिप दुखाई? तपाईंले यो जान्नुपर्दछ!
हिप दुखाइको लागि पनि म के गर्न सक्छु?
हिप दुखाइको लागि दुखाइ राहतको लागि सिफारिश गरिएका उत्पादहरू
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Enbent-yogapositur.jpg?media=1648573622 389 750 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2016-06-28 07:49:422022-03-18 17:25:50Yoga योग व्यायाम हिपको दुखाइको लागि
एडीको सूजन अध्ययन: जैतुनको तेल इबुप्रोफेनको जस्तै कार्य गर्दछ